Ndi gị VLC egwu MP4 Videos? Bụ n'ebe ọ bụla nsogbu, nke ị na-amaghị nke? Ị bụ a nsogbu, ihe na-akpata MP4 Video na-agba ọsọ na VLC Player? E nwere ike ịbụ ihe ụfọdụ mere nke VLC apụghị egwu ụfọdụ mp4 faịlụ. Ha na-atụle dị ka ndị a.
Part 1: Ụfọdụ ihe mere nke VLC apụghị egwu ụfọdụ mp4 faịlụ
Part 2: Usoro nke ntughari nke MP4 File ka .avi format
1.Reason: nwere ike ịbụ MP4 Video rụrụ arụ ma ọ bụ adịgboroja
Ngwọta: E nweghị ngwọta n'ịtụle VLC Akụkụ ụfọdụ. Ihe niile ị chọrọ bụ ibudata ziri ezi MP4 Video, nke bụ rụrụ arụ na nke nwere ike na-arụ ọrụ ezi.
2.Reason: Ka ịbụ VLC "video mmepụta ụdịdị" e debere ihe ọjọọ.
Ngwọta: Na ọnọdụ a, niile ị chọrọ bụ hazi X Server n'ụzọ ziri ezi. Dị nnọọ ịhụ screenshot maka otu.
Mepee VLC, na-aga Ngwaọrụ, na pịa Mmasị. Gaa Video ngalaba na-enyere Video, bụrụ na ọ bụ un-pịrị. Mgbe ahụ Lelee igbe maka Ohere decorations, ọ bụrụ na ọ bụ un-pịrị. Mgbe ahụ, setịpụrụ mmepụta adaala menu ka X11 video mmepụta (XCB) na ịzọpụta mgbanwe na Malitegharịa ekwentị gị VLC Player maka mgbanwe-abịa irè.
The n'elu kwuru banyere snapshot akọwa ị n'ụzọ zuru okè, na-esi na-eme ya na-enweta faịlụ-aga were were on VLC.
3.Reason: The MP4 video codec nsogbu nwere ike ịbụ nke atọ mere nke VLC Media Player adịghị egwu MP4.
Ngwọta: N'ezie, MP4 bụ a akpa video format nke n'ozuzu nwere ọtụtụ audio, video, na sobtaitel iyi. Na ọnọdụ, Ọ bụrụ na onye MP4 faịlụ dere a VLC kedi video codec, ọ ga-ada na-egwu na VLC.
Na nke a, anyị kwesịrị iji tọghata MP4 ka VLC ọzọ na-akwado video usoro. N'ihi na nke a dị mkpa ka ị na-eji Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ bụ nke zuru okè ngwọta na bụ nke zuru okè ngwọta maka niile ụdị nke akakabarede. Ọ pụrụ n'ezie Ụka, dezie, welie, download, ọkụ, hazie, kpọọ, na-ekiri na n'elu 150 formats. Ọ bụ karịrị nnọọ a Ntụgharị na bụ otu n'ime ihe kasị ike ngwa, nke bụ n'aka izute niile mkpa nke video akakabarede na ike ịbịa aka na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe ngwọta maka 30x ngwa ngwa video nchigharị, na nwere dị iche iche nke ndakọrịta.
Nkebi nke 2: Usoro nke ntughari nke MP4 faịlụ ka .avi format
Niile ị chọrọ bụ ka ịgbakwunye faịlụ pụtara n'ihi na akakabarede nzube na họrọ mmepụta format, nke bụ n'aka na-an. Avi ndọtị Maka nsonaazụ kacha mma na VLC. Ị pụrụ ọbụna ịgbanwe etiti udu wdg, ma, ọ na-atọrọ ka an-kpọ. Mgbe ahụ, ị mkpa pịa tọghatara, ugbu na aka nri n'akụkụ nke interface kwupụta na ala na ị ga na-ahụ gị video ọkọdọ converted na ngwa ngwa oge. Ugbu a, ị pụrụ ịnụ ụtọ gị video na VLC na ike nwere ihe kasị mma ahụmahụ nke VLC.
Ebe a na snapshot, ị nwere ike ihe echiche nke usoro nke ntughari nke faịlụ ka ọ bụla ọzọ format site n'iji Wondershare Video Converter Ultimate.
13 VLC skins na-eme ka VLC Media Player anya ịtụnanya!
> Resource> VLC> Ngwọta on MP4 Video na-egwu na VLC Player